Askarta Carabta ee ku nool Israel oo u dagaalamaya Israel - BBC News Somali
8 Nofembar 2016
Waa aroornimadii lama degaanka Negev, Maxamuud Kashua wuxuu tukanayaa salaada subaxnimo - qori ayaa agtiisa yaala. Maxamuud wuxuu kamid yahay Carabta Israel ee iskood ugu biiray ciidamada Israel.
"Waxaan isku arkaa Carab iyo Muslim laakiin sidoo kale inaan ka mid ahay waddankan," Maxamuud ayaa sheegay isagoo ka nasanaya tababarka xerada. "Waa waddankeenii waana inaan gacan siinaa inta aan awoodno dowladda na ilaalisa."
Lix bilood ayay laanta BBC ee carabiga ay fursad u heshay inay filin ka samayso Gadsar - oo ah qayb 500 oo askar Carab ah oo ka tirsan ciidanka Israel. Toban jibaar Carabta Israel ayaa ku soo biiraya ciidanka Israel ee IDF markii la barbar dhigo saddex sano ka hor.
"Ujeedadeenu waxay tahay inaan qorno inta aan awoodno ," ayuu sheegay Col Wajdi Sarhan, oo madax u ah ciidanka Israel ee IDF qaybta dadka laga tirada badan yahay. "Waxaan leenahay dhowr boqol waxaana doonaynaa inaan laba jibaarno sanadka danbe".
Labaatan boqolkiiba dadka reer Israel ayaa ah Carab laakiin 1% ayaa ka tirsan ciidamada.
Hanin Zoabi ayaa ah xildhibaan Carab ah ee Israel oo isku aragta inay tahay Falastiiniyad waxay aad u dhaleecaysaa dowladda.
"Qaybtan yar ee askarta ee ku jira ciidanka Israel oo u adeega Israel oo ka soo horjeeda dadkooda waxay og yihiin inay dhaafayaan xadka wadaninimada" ayay sheegtay
"Sagaashan boqolkiiba Carabta ka tirsan ciidanka Israel kuma haystaan sinaan Israel. Israel uma baahna inay difaacaan, waa siyaasad- kala qaybi kadibna u tali. "
'Ka tirsanaanta ciidanka Israel'
Dokumentariga BBC ayaa la socday Gadsar markay ka mid noqotay qaybtii ugu horaysay ee ciidanka oo Carab ah oo ka howlgala dhulka la haysto ee Daanta Galbeed, oo ay degan yihiin 1.7 milyan oo Falastiiniyiin ah.
Waa waqti ay xiisad jirto, snadkii hore 37 reer Israel ayaa lagu dilay weeraro la isticmaalay mindi, xabad iyo baabuur oo ay qaadeen Falastiiniyiin ama Carab reer Israel.
Image caption Ciidanka ka tirsan Gadsar ayaa ku dhaaranaya Quraanka inay daacad u yihiin Israel
In ka badan 200 oo Falastiiniyiin ayay Israel sheegtay in la dilay oo u badan dadkii weerarka qaaday.
Fariisimaha wax lagu baaro ee u dhaxeeya dhulka ay haytaan dadka Yuhuuda, Maxamed Ayashi, oo ah askari Muslim ah, ayaa joojinaya baabuur ay leeyihiin Falastiiniyiin.
"Mararka qaar way adag tahay sababtoo ah Carab ayaan ahay iyaga camal, hoos ayay ii fiiriyaan, laakiin shaqadayda ayaan qabsanayaa waana inaan sameeyo," ayuu sheegay Maxamed. "Dadka qaar jawaabta ay nasiinayaan waxaad ka garanaysaa nacaybka ay noo qabaan- si nacayb leh ayay hoos noogu fiiriyaan."
Darawal ayaa sheegay Maxamed inuu shaqadiisa qabanayo oo uu xor yahay, laakiin mid kale ayaa ka xanaaqsan.
"Waxaan jeclaan lahaa askari Carab ah inuusan shaqadan qaban - kuligeen Carab ayaan nahay ayuu sheegay darawalka. Waxaan u aragnaa inuu yahay reer Falastiin laakiin wuxuu u adeegayaa ciidamada na haysta. "Ma garanayo waxa aan ka dhaho".
Saldhiga Gadsar Mahmud iyo ciidamada kale ee la soo qoray ayaa ku dhaaranaya inay daacad u noqdaan Israel. Waalidkiis iyo saaxiibtiis ayaa jooga si ay u arkaan dhaartiisa isagoo la siinayo qori.
"Waan ku faraxsanahay - waa waxa uu doortay waana taageeraynaa. Waan faraxsanahay wuuna faraxsan yahay," ayuu sheegay aabihiis, Jamil Kashua.
Image caption Mahmud wuxuu ka kamid yahay ciidamada Carabta ee ka tirsan Israel
Waqooyiga Israel xaafada Carabta xaflad ayaa jirta oo loo qabtay Maxamud. Laakiin dharka askarta ayuu ku xiranayaa oo kaliya guriga reerkiisa.
"Dad yar oo i arkay anoo xiran dharka askarta ayaa ii sheegay inaan qiyaamay waddanka. Waxaan u sheegay waa shaqadayda laakiin ma kala jecli waxa ay dadka dhahaan" ayuu sheegay Maxamud.
"Hadaan qiyaanlow ahay muxuu asaga u dagan yahay waddanka?"
Si ka duwan saaxiibadiis Maxamuud ayaa hela mishaar fiican. Wuxuu codsan karaa dhul uu guri ka dhisto.
"Dadka ku biira askarta waxay haystaan shaqo fiican iyo nolol fiican " ayuu sheegay Jamil " Ciidanka ayaa lacag ku taageera noloshoodana way hormartaa."
Image caption Askari ka tirsan Gadsar oo ka howlgala Daanta Galbeed ee ay Israel haysato
Dowladda Israel inay kordhiso tirada Carabta ee ku biiraya ciidanka waxay u tahay isdhexgal labada dad.
" Waxaan samaynaynaa wax walba si aan dadka laga tirada badan yahay ugu darno ciidanka" ayuu sheegay Col Sarhan. "In ciidanka laga mid ahaado waa habka ugu fiican ee Muslimiinta waddankooda loogu xiri karo."
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Carabta Israel ayaa ku eedeeyay dowladda inay dadka laaluush ku samaynayso. "Israel ayaa doonaysa dadka saboolka oo aan shaqada haysan inay ku biiraan ciidanka" ayay sheegtay Hanin Zoabi.
"52 ilaa 54% dadka reer Falastiin ayaa aad sabool u ah - siyaasada dowladda ee abuurtay saboolnimada ayaa dadka ku qasbaysa inay raadiyaan xal."
"Toban qof oo ka socota magaaladayda ayaa ciidanka ka tirsan. Waxaan leeyahay saaxiib rabo inuu ku soo biiro" ayuu sheegay Maxamuud. Waxaan ku dhiiri galinayaa qof walba inuu ku soo biiro si uu noloshiisa u hormariyo oo mustaqbalka ay ka fikiraan".